सगरमाथाको उचाई अहिले कति छ? नेपालीबाट पहिलो पटक मापन हुँदै – Rastriyapatrika
सगरमाथाको उचाई अहिले कति छ? नेपालीबाट पहिलो पटक मापन हुँदै
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न जाने नेपाली टोलीलाई बुधबार बिदाइ गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले टोलीलाई माला र टीका लगाएर बिदाइ गर्नुभयो । टोलीमा नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारी खिमलाल गौतम, रवीन कार्की, सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धिताल हुनुहुन्छ । पथपदर्शक छिरिङजाङ्बु शेर्पा, पेमा ङिमा शेर्पा, आङ्पासाङ शेर्पा, आङ्बु शेर्पा र केशव पौडेल पनि साथमा हुनुहुनेछ ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मापन पहिलो पटक नेपालीले गर्न लागेको बताउँदै यस पटक परिणाम नै आधिकारिक हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आरोहीलाई सम्पूर्ण नेपालीका तर्फबाट शुभकामना दिँदै पथप्रदर्शकको निर्देशनानुसार सगरमाथाको आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले आरोहण चुनौतीपूर्ण रहेकाले मौसम र स्वास्थ्यको अनुकूलतामा सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्न आरोहण टोलीलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले टोलीलाई लक्ष्य हासिल गर्नका लागि शुभकामना दिनुभएको छ । तर मौसम र स्वास्थ्यलाई भने ख्याल गर्न प्रधानमन्त्रीले सुझाउनु भएको छ ।
‘लक्ष्यमा अडिग रहनुहोस् तर स्वास्थ्यले साथ दिएन वा मौसम प्रतिकूल भयो भने जिद्धी नगर्नुहोस । सगरमाथा त्यहीँ हुन्छ । अर्को पटक गएर नापेर आए हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘गाइडको निर्देशन पालना गर्नुहोला ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन हुँदैछ । तपाईंहरुले सेन्टिमिटरसहितको उचाइ नापेर ल्याउनु होला’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरुले ल्याएको नाप नै सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हुनेछ ।’